Warshadaha Qaybaha Gudaha - Soosaarayaasha Qaybaha Gudaha Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Automobile muraayad gudaha multimedia xakamaynta buro naqshadeynta badhanka badhanka 5 taxane 7 taxane X1 X3 X5 Rotary Switch for bmw
Badhanka bilowga Crystal. Si sahlan loo rakibo oo maadadu u xoqdo una xoqdo abrasion. Waxyaabaha la soo dhoofiyo, habka electroplating. Midabka dahaadhku wuxuu ku dhow yahay gaariga asalka ah. Natiijooyin aad u fiican ka dib iftiinka habeenkii. Badhamadu si cad ayey u muuqdaan habeenkii, iyagoo xoojinaya aragga taabashada. Lagu horumariyay iyadoo lagu saleynayo xogta gawaarida asalka ah. La qabsiga sare. Ma saameynayso xasaasiyadda ka dib rakibidda.
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida loogu talagalay BMW x5 g05 i8 E36 E39 FandG chassis maqaarka shaqsiga isbedelka
LED knob-cont lever. Isbeddelka ayaa u fudud sida tan. Muuji iftiinka muujinta Muuqaalka midabka asalka ah. Kaliya maaha kaliya laakiin sidoo kale gudaha, adoo isticmaalaya nalalka asalka ah ee LED-ka. Nidaamka electroplating BMW OEM. Tayada asalka ah ee loo yaqaan 'chrome plated strip' ee BMW, isku xirnaasho la'aan, nolol dheeri ah, iftiin waara. Nasashada maqaarka maqaarka, dareemo raaxo. Wareeg kastaa wuxuu lamid yahay taabashadaada naftaada, raaxo ka baxsan sharaxaadda. Gaarsiiso sax. Ku raaxayso raacitaanka.
Qalabkan wareegsan ee loo yaqaan 'crystal shift' wuxuu beddeli doonaa buro-wareeggaaga hadda jira. Qalabka birta ah ee loo yaqaan 'crystal gear gear' wuxuu ka samaysan yahay crystal diamond cut syntical, oo la mid ah Swarovski crystal, oo aad ugu eg qalabka xakamaynta muraayadaha ee ay soo xushay warshadda BMW. Muraayadda wareegga wareejinta qalabka ayaa leh muuqaal soo jiidasho leh, oo noqota xarun quruxsan oo qurux badan oo ku dhex taal gudaha BMW. Qaybta 'Crystal Gear Shift' waxay ku qalabeysan tahay astaanta nooca "X", iftiinka hoos ayaa laga ifiyey, taasoo ka dhigaysa mid qurux badan ...
Bandhig badeecad: Sharaxaad: Iyada oo ku saleysan BMW 7 Taxanaha qalabka furitaanka maareynta, oo lagu dabaqi karo 1 taxane ah oo ah seddex qaybood, 2 taxane ah oo safar ah, X1 iyo X2. Sida ku cad asalka 1: 1 soosaarka furitaanka iyo furitaanka 100% dhameystirida, adoo adeegsanaya habka electroplating BMW OEM iyo BMW xarigga tayada qurxinta tayada tayada leh, iskuxir la'aanta, nolol dheer, dhalaal dheer. Taageerada dhabarka maqaarka, dareemo raaxo, isbeddel kasta wuxuu lamid yahay taabashada naftaada ...
Waxaan qaadannaa midab asal ah, shaashadda tusiyaha shaashadda, iyadoo la adeegsanayo muraayadda 'BMW' ee tayada asalka leh ee 'chrome strip' Dhammaan alaabooyinka soo saarkeennu waa 1: 1 oo la soo saaray iyadoo loo eegayo soosaarkii asalka ahaa ee BMW.
Qalabka korontada ku shaqeeya ee elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'Electroplated dhalaalaya' ee loogu talagalay BMW taxanaha oo dhan. Nidaamka korantada ee heerka sare si loo soo celiyo asalka asalka midabaynta gawaarida ma saameynayso wareegga iyo isticmaalka furaha. Cadaadiska Scartch iyo xirashada Resistance Mirror daaweynta dusha sare ee farsamada xoqida xoqida gaar ahaaneed waxay haysaa shaqadii hore ee qoritaanka.